Global Voices teny Malagasy » 3 Taona An-tranomaizina Noho Ny Fandokoana Fefy Taminà ‘Loko Atsifotra’ ? Fotoana izao Hitenenanao Hoe : ‘Tsia’ · Global Voices teny Malagasy » Print
3 Taona An-tranomaizina Noho Ny Fandokoana Fefy Taminà ‘Loko Atsifotra’ ? Fotoana izao Hitenenanao Hoe : ‘Tsia’
Voadika ny 06 Septambra 2014 5:33 GMT 1	 · Mpanoratra 350.org Nandika Nancy
Sokajy: Eoropa Afovoany & Atsinanana, Rosia, Fitantanam-pitondrana, Lalàna, Mediam-bahoaka, Tontolo_iainana, Akon'ny RuNet, Lalao Olaimpika
Dikasary avy amin'ny freevitishko.org.
Migadra mandritra ny 3 taona ilay Rosiana mpandala ny tontolo iainana, Evgeny Vitishko, taorian'ny niampangan'ny  sarintsarim-pitsaràna iray azy tany am-piandohan'ity taona ity ho nanatsifotra loko tamin'ny fefy iray naorina tsy ara-dalàna tamin'ny 2012 tao amin'ny valan-javaboaharim-pirenena. Talohan’ny fisamborana sy ny fanagadrana azy dia niasa tsy nahatsiaro reraka nampibaribary ireo heloka bevava atao amin'ny tontolo iainana izy, isan'izany ny fahasimbana nateraky ny fananganana ny tanàna midadasika be an'ny governoran’i Kransodar.
Nanao fanentanana fanangonan-tsonia tamin'ny alàlan'ny Fikambanan'ny fiarahamonim-pirenena maneran-tany “Avaaz” ireo mpikambana ao amin'ny freevitishko.org (avoahy Vitishko) tamin'ity lohataona ity. Izay te-hanohina io hataka mitaky ny fanafahana tsy misy hatak'andro sy tsy misy fepetra an'i Vitishko io dia afaka manoratra ny anarany eto  amin'ity fangatahana ity
Rosiana voalohany mpandala ny tontolo iainana i Evgeny Vitishko, mpikambana amin'ny Andrimason'ny Tontolo Iainana (EWNC) any Kaokazy Avaratra izy no sady ny tranainy amin'ny hetsika ekolojika any amin'ny faritra Kaokazy Avaratra. Niasa an-taona maro nanakana ny fandravana ny valan-javaboahary nasionaly any Rosia izy no sady nampahafantatra ihany koa ny be sy ny maro ny fandotoana ny morontsiraky ny Ranomasina Mainty. Nanetsika ny aingam-panahin'ireo mpikatroka mafàna fo eny ifotony manerana an'i Rosia ihany koa i Vitishko, hampiroborobo ny foto-kevitra “misaina an'izao tontolo izao, misaina ny eo an-toerana”.
Nanomboka nisotasota an'i Vitishko avy hatrany ny governemanta taorian'ny nampirantian'izy sy ilay namany mpiaro tontolo iainana mpanara-dia azy, Suren Gazaryan, ny ireo faharavan'ny tontolo iainana vokatry ny fananganana tsy ara-dalàna ny fonenan'ireo Rosiana mpanankarena sy matanjaka. ( Heverina fa an'ny Filoha Putin, an'i Tkachev governoran'i Krasnodar, ary an'i Kirill mpitondra fivavahana ireo lapabe naorina ao amin'ny faritra voaaro manamorona ny Ranomasina Mainty Rosiana). Napoitran'i Vitishko sy Gazaryan fa noravan'ireo mpiasa nanao ireo trano ireo ny faritra nisy ilay karazan-kazo “sapin” efa ahiana ho lany taranaka.
Nametraka fitarainana niaraka tamin'ireo antokon-draharaha Rosiana miandraikitra ny fiarovana ny tontolo iainana i Vitishko sy i Gazaryan rehefa nahatsikaritra fefy natsangana tamin'ny fomba tsy ara-dalàna, nefa dia novalian'ny manampahefana fa tsy misy izany fefy izany. Mba hanaporofoana ny hadisoan'ireo manampahefana ireo dia nanao hetsika teo amin'ilay fefy i Vitishko sy Gazaryan, izay nanoratan'ny olona iray nanatrika teo tamin'ny ‘loko atsifotra’ teny fanevam-panoherana mitsikera ny governora sy ilay fanorenana tsy ara-dalàna Novalian'ny mpitandro filaminana tamin'ny fiampangàna an'i Vitishko sy i Gazaryan taminny “fandravàna niniana natao na famotehana fananan'olona niafara taminà fahasimbàna lehibe sy natosiky ny asan-jiolahy,” izay nitanisàny ny andininy faha 167, andalana faha 2, ao amin'ny lalàna Rosiana momba ny heloka bevava. Voasazy 3 taona sazy mihantona miaraka amin'ny 2 taona fanaraha-maso ireo roalahy mpandala ny tontolo iainana.
Raha mbola nandrahona azy aminà heloka hafa ny fitondrana, dia nandao ny firenena i Gazaryan. Azony ny Loka ‘Goldman’-n'ny fiarovana ny tontolo iainana, taona 2014.
Evgeny Vitishko kosa nijanona tany Rosia ary nanohy ny asany. Tamin'ny Novambra 2013, talohan'ny Lalao Olaimpika Sochi, nolazainy ny famoahana tatitra iray vaovao avy amin'ny EWNC momba ny fiantraikan'ireo fanorenana fotodrafitr'asan'ny Olaimpika any Sochi. Nasongadin'i Vitishko ny fomba nanovàn'i Rosia ireo lalàna federaly maro mba hahafahana manangana ny fotodrafitr'asan'ny lalao Olaimpika amin'ny faritra arovana. Vokany, tena nanamaivana ny fiarovana ny tontolo iainana Rosiana ireo fanovàna ireo ary nanafaingana ny fivoarana nanerana an'i Rosia (tsy tany Sochi ihany). Miatrika loza mitataon'ny mety ho fahafonganan'ny ala amin'ny ankapobeny, tonga amin'ny haavo izay hisian'ny fiantraikan'izany amin'ny tontolo iainan'ny tany manontolo mihitsy i Rosia amin'izao fotoana izao, araka ny filazan'i Vitishko.
Ny Desambra 2013, novàn'ny fitondrana ho sazy mihatra ilay sazy mihanton'i Vitishko, tamin'ny fandefasany azy ho any aminà fonja iray noho ny antony lazaina fa ‘ tsy nanaja ny fifanarahana izy”. Migadra any Tambov izy hatramin'izao.
Raha toa ka mahangona sonia maherin'ny 20.000 ny fanentanana ” Avoahy Vitishko” amin'ny herinandro ho avy eo dia ho zarain'ny Avaaz ao amin'ny sehatra iraisam-pireneny ilay fangatahana, ary mbola hiezaka izy mba hahangona sonia 100.000 sy hanome fanentanana ilaina sy misimisy kokoa ho an'ny tranga mahazo an'i Vitishko. Matoky ny firaisankinan'ny vondrom-piarahamonina iraisam-pirenena ireo Rosiana mpandala ny tontolo iainana.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/09/06/62930/